बिहेपछि किन मोटाउँछन् महिला ? यी हुन् ७ कारण | NewsSudur
बिहेपछि किन मोटाउँछन् महिला ? यी हुन् ७ कारण
हामीले देखेकै छौं, भोगेकै छौं, बिवाहपछि अक्सर महिलाहरु मोटाउँछन् । केही न केही शारीरिक परिवर्तन हुन्छ । जबकी बिवाहअघिको अवस्था त्यस्तो हुँदैन । त्यसअघि उनीहरु आफ्नो फिगरमा बढी नै सर्तक हुन्छन् । संभव भएसम्म आफ्नो फिगर मेन्टेन गर्छन् । आफुलाई आकर्षक र छरितो बनाउने प्रयासमा रहन्छन् ।तर, विहेपछि उनीहरु बद्लिन्छन् । उनीहरुको शरीर मोटाउन थाल्छ । किन ?
हाम्रो जस्तो सामाजिक परिवेशमा बिवाहपछि अधिकांश महिला पतिको घर-परिवारमा एडजस्ट हुनुपर्ने हुन्छ । उनीहरु नितान्त भिन्न परिवार र परिवेशमा पुग्छन् । यससँगै उनीहरुको दायित्व पनि फेरिन्छ । बिवाहअघि आफ्नो मात्र ख्याल गरिरहेका महिलाहरुले आफ्ना श्रीमान्, सासु ससुरा लगायत परिवारका अन्य सदस्यको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले आफुलाई फिट एन्ड फाइन राखिराख्न अलि गाह्रै हुन्छ ।पारिवारिक दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा महिलाहरुले आफ्नो शारीरिक बनौट र सौन्दर्यमा ख्याल गर्न पाउँदैनन् वा फुर्सद मिल्दैन । यहि कारण उनीहरुको शरीर भद्दा हुँदै जान्छ ।
अक्सर बिवाहअघि घुमफिर गर्ने, साथीहरुसँग दिन विताउने, जागिर खाने, पढ्न जाने जस्ता गतिविधि गरिरहेका हुन्छन् । बिवाहपछि घरधन्दामै अलमलिनु पर्ने बाध्यता हुनसक्छ । धेरैजसो महिलालाई बिवाहपछि जागिर खाने, पढ्ने अनुकुलता मिल्दैन । उनीहरु धेरैजसो समय घरमै विताउन थाल्छन् । घरमा बसेको बेला एक्लै हुने र केहि न केहि खान तलतल लागिरहने हुन्छ । त्यसैले उनीहरुको मुख खाली हुँदैन, केहि न केहि चपाइरहकै हुन्छन् ।अन्य दिनको तुलनामा धेरै स्न्याक्स वा चिया सेवन गरिरहेका हुन्छन् । एक्लै भएको बेला सुत्ने पनि गर्छन् । वा टेलिभिजन हेर्छन् । टेलिभिजन हेरेको बेला केहि न केहि खाइरहेकै हुन्छन् । त्यस अनुपातमा शारीरिक गतिविधि कम हुन्छ । यसले पनि उनीहरुको मोटोपन बढ्छ ।
विवाहित जीवनमा प्रवेश गरेपछि महिलाहरुमा भावनात्मक तथा हार्मोनल परिवर्तन पनि आउँछन् । सेक्सका दौरान शारीरिक परिवर्तन पनि शरीरमा हुन थाल्छ । सम्वन्धलाई कसिलो बनाउन सेक्सुअल लाइफमा सक्रिय हुनाले पनि वजन बढ्न सक्छ । सेक्सपछि भोक जाग्छ र खान धेरै रुच्छ । त्यसैले वजन त बढ्ने नै भयो ।यसका अलावा कतिपय महिलाहरुले आफूलाई सुरक्षित राख्न गर्भनिरोधक चक्कीहरुको पनि सेवन गर्न थाल्छन् । यसले पनि मोटोपना बढाउँछ ।